प्रेमका नाममा पनि जन्मन्छ अपराध - अपराध - साप्ताहिक
प्रेमका नाममा पनि जन्मन्छ अपराध
संसारभरका प्रेमी/प्रेमिकाहरू प्रणय दिवसको तयारीमा जुटिरहेका छन् । कोही गिफ्ट छान्दैछन्, कोही घुमघामको तयारी गर्दैछन् । कोही भ्यालेन्टाइन पार्टी आयोजना गर्ने मुडमा त कोही प्रेमी/प्रेमिकालाई उपहार दिने अनमोल हरफहरूको खोजीमा होलान् । संसार प्रेमको उल्लासले रंगिँदै जाँदा नवलपरासीकी एक युवतीलाई उनकै प्रेमीले भ्यालेन्टाइन डेको एक सातापूर्व ‘क्रूर’ उपहार दिएका छन् ।
गएको २३ माघको रात आफ्नी प्रेमिका गैडाकोटकी २७ वर्षीया तुलसा सापकोटाको शरीरमा एसिड छर्केर हत्या गर्ने प्रेमी हुन्— धादिङ, नौबिसेका २८ वर्षीय सुनिल कोइराला । उनले विवाह गर्न नमानेको भन्दै बुटवलको मेरिडियन होटलमा मध्यरातमा आफ्नी प्रेमिकामाथि एसिड छ्यापेका थिए । एसिडले जलेकी तुलसाको उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउन नपाउँदै सोमबार ज्यान गयो । सुनिलले आफू लामो समयदेखि तुलसासँग प्रेममा रहेको र विवाह गर्न नमानेपछि एसिड छ्यापेको प्रारम्भिक बयान दिएका छन्।
सफल प्रेम जसरी अमूल्य खुसीको कारण बन्छ, असफल प्रेम त्यसरी नै दु:खको नियति बन्ने गरेको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । प्रेममा रहँदा जति माया हुन्छ, त्यो कालान्तरमा विषमा परिणत भएका यस्ता दृष्टान्त बग्रेल्ती फेला पर्छन् । असफल प्रेमले ठूला र भयानक दुर्घटनाहरू समेत निम्त्याएको पाइन्छ ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र विवादास्पद दरबार हत्याकाण्डका पछाडिको मुख्य कारण पनि तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहको प्रेमलाई मानिएको थियो । १९ जेठ २०५८ को रात भएको नाराणहिटी दरबार हत्याकाण्ड मच्चाएका भनिएका दीपेन्द्रले आफ्नी आमा तथा तत्कालीन रानी ऐश्वर्याले प्रेमिका देवयानी राणालाई बुहारीका रूपमा स्वीकार नगर्ने अड्डी कसेपछि वंश नै नास हुने गरी दरबारमा गोली चलाएको बताइन्छ ।
प्रेमसँग जोडिएका अपराधका घटना संसारभर घट्ने गरेका छन् । प्रेममा धोका भएपछि हत्या गर्ने, आत्महत्या गर्ने, दुव्यर्सनमा फस्ने, सम्बन्ध बिग्रिएपछि फेसबुकमा अश्लील गालीगलौज गर्ने, नग्न तस्बिर र भिडियोहरू इन्टरनेटमा अपलोड गरेर ब्ल्याकमेलिङ एवं चरित्रहत्या गर्ने, प्रतिशोधको अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने, सम्बन्धमा रहँदा खिचिएका गोप्य भिडियोहरूमार्फत ब्ल्याकमेलिङ गरेर जबरजस्ती सम्बन्ध बनाउन दबाब दिनेजस्ता नियतजन्य घटना एकातिर देखिन्छन् भने अर्कातिर प्रेममा रहेका जोडीहरू नजानेर पनि अपराधमा फस्ने घटना उत्तिकै छन् ।
लामो समय अपराध अनुसन्धानमा काम गरेका नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी हेमन्त मल्ल क्षणिक आवेग र प्रतिशोधका कारण प्रेममा अपराधजन्य घटना घट्ने बताउँछन् ।जोडीहरू रमाइलोका लागि अवैध शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्ने र पछि गर्भ रहन गएपछि अवैध सम्बन्ध लुकाउन शिशुलाई मार्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको गत वर्षको आधिकारिक तथ्यांकले १७ प्रतिशत किशोरीले त कानुनी रूपमै यस प्रकारको गर्भपतन गराएको देखाएको थियो । गैरकानुनी रूपमा गर्भपतन गरेर शिशु मार्ने वा जन्मिसकेपछि शिशुलाई अलपत्र छाडेर हिँड्ने घटनाको ग्राफ पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।
कतिपय अवस्थामा प्रेमी/प्रेमिकाहरूले केही बेरको आवेगलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि यस्ता घटना घट्ने गरेका छन् । आखिर सबैभन्दा निकट र प्रगाढ मानिने प्रेमसम्बन्ध टुटेपछि ज्यानै लिने वा चरित्र हत्या गर्ने किसिमले मानिसहरू किन प्रतिशोधमा उत्रिन्छन् ? अपराधशास्त्री प्रा. माधव आचार्यका अनुसार आधुनिकताका नाममा छाडापन भित्रिएकाले प्रेमजस्तो पवित्र बन्धनमा अपराधजन्य विकृतिहरू देखा पर्न थालेका हुन् । यो अहिलेको पुस्तामा देखिएको छाडापनको परिणाम हो । प्रा. आचार्य भन्छन्, ‘युवायुवतीहरूबीच भावनात्मक प्रधानता हुन्छ, परिपक्वता नआएका कारणले अपेक्षाको सम्बन्ध हुन्छ । अपेक्षा पूरा नहुँदा त्यो ठूलो निराशा र डिप्रेसनमा परिवर्तन हुन्छ ।’ प्रा. आचार्यका अनुसार अन्तत: त्यही डिप्रेसन बदलाभावका रूपमा अपराध कर्ममा प्रकट हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीको एक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ४ हजार ६ सय ६७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसो त नेपाल विश्वमै सर्वाधिक आत्महत्या हुने मुलुकको सातौं स्थानमा छ । नेपालमा प्रत्येक १ लाख जनामा २५ जनाले आत्महत्या गर्ने भयावह अवस्था रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । प्रहरीसँगको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकसँग सम्बन्धित आत्महत्याको प्रमुख कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण प्रेम हो ।
प्रेमीको लिंग काटेर कुकुरलाई
मोरङको बेलबारीमा एक साताअघि भएको एउटा घटनाले यौनमा सन्तुष्टि नहुँदा मानिसले केसम्म गर्दैनन भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । आफ्नो यौनइच्छा पूरा नगरेको अर्थात् आफूले भनेको बेलामा आफूसँग सम्पर्क नगरेको रिसमा एक अधबैंसे महिलाले उनका पूर्वप्रेमीको लिंग काटेर हत्या मात्र गरिनन्, उनको लिंग छिनालेर कुकुरलाई ख्वाएको समेत बताइन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा बेलायती सेनामा कार्यरत श्रीमान्का ती ४५ वर्षीया श्रीमतीले उनका पूर्वप्रेमी अटोरिक्सा चालकको यसरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिन् कि जुन सुन्दासमेत आङ सिरिङ्ग हुन्छ । एक साताअघि पानीमा डुबेको अबस्थामा एक व्यक्तिको शव फेला परेको थियो । जुन शव सडेगलेका कारण चिनिने अवस्थामा थिएन । प्रहरीले शव डीएनए परीक्षणका लागि पठायो । केही दिनपछि मदिरा सेवन गरेका एक स्थानीय युवाले आफना हितैषीमार्फत घटनाको पोल खोले र अनुसन्धानका लागि प्रहरीले ती युवा र आरोपी महिलालाई नियन्त्रणमा लियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार पोल खोल्ने ती युवा महिलाका हालका प्रेमी हुन् । उनीहरू दुवै जना मिलेर उक्त हत्या गरेको बताइन्छ ।
घटना विवरणअनुसार मृतकसँग लामो समयदेखि सम्बन्धमा रहेकी ती महिलाले आफूले चाहेको बेला यौनसम्पर्क गर्न नपाएको झोँकमा नयाँ प्रेमी बनाएको र पुरानो प्रेमी आफ्नो प्रेममा तगारो बन्न थालेपछि उनलाई सुनियोजित रूपमा बोलाएर मादक पदार्थ सेवनका क्रममा खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरिएको बताइन्छ भने उनको लिंग काटेर कुकुरलाई ख्वाइएको जानकारी प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । अनुसन्धान जारी रहेका कारण अभियुक्तहरूको नाम भने प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन ।
मरौंला वा मारौंला भनेर कसैले प्रेम गर्दैन
प्रेम कुन अवस्थामा अपराधमा परिवर्तन हुन्छ ?
प्रेममा एसिड छ्याप्ने घटना एकहोरो प्रेम गर्ने अर्कातिर एसेप्ट नभएको अवस्थामा घट्ने गरेको पाइन्छ । एकतर्फी प्रेममा पनि हत्या हुन्छ । अवैधानिक गर्भ रहेपछि र विवाह हुने अवस्था नरहे त्यसलाई लुकाउन पनि केटीको हत्या भएका घटना उत्तिकै छन् । केटाकेटीको लभ भयो र यो रहस्य बाहिर खुल्ने डरले पनि हत्या भएको देखिन्छ । बाहिर एक्स्पोज हुने डरका कारणले मानिस हत्यासम्म तानिन्छ ।
प्रेममा आत्महत्या किन हुन्छ ?
ब्रेकअप भएपछि सहन नसकेर आत्महत्या हुने हो । एकहोरो प्रेममा आत्महत्या हुन सक्दैन, त्यसमा रियाक्ट गरेर अपराध हुने हो । जातीय, आर्थिक तथा कतिपय अवस्थामा भौगोलिक हिसाबले बेमेल प्रेमसम्बन्ध टुटेपछि त्यसले आत्महत्याको रूप लिन सक्छ ।
प्रेममा अपराध जोडिनुको कारण के होला ?
क्षणिक सोचले गरिने प्रेममा अपराध हुने गरेको देखिन्छ । मरौंला र मारांैला भनेर कसैले प्रेम गर्दैन । प्रेमसम्बन्धमा कुनै यस्तो क्षण पनि आउँछ, जतिबेला ऊ त्यो सम्बन्ध त्यहाँबाट अगाडि बढ्दैन् अनि हत्या गर्छ । हत्या, आत्महत्या र एसिड छ्याप्ने घटनाहरू क्षणिक र उत्तेजनात्मक आवेगका परिणति हुन् ।
मानसिम कमजोरी प्रमुख कारण
करुणा कुँवर मनोविद
टिनएजमा केटाकेटीहरू एक–अर्काप्रति आकर्षित हुने र प्रेममा पर्ने घटना थुप्रै हुन्छन् । भविष्यका दृष्टिले यो तिम्रा लागि ठीक होइन, योसँग भविष्य राम्रो हुँदैन जस्ता कुरा गरेर परिवारले दबाब दिँदा आत्महत्या हुने गरेको देखिन्छ । परिवारले दिने दबाब फ्रस्टेसन हुँदै आफैंलाई सिध्याउने अवस्थासम्म पुग्छ । यसमा हाम्रो सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षहरूले पनि काम गरेको देखिन्छ ।
यस्तै मिडिल एजमा जीवनसँग जोडिएका कतिपय अपेक्षा पूरा भएनन् भने डिप्रेसन हुन्छ । यस्तो डिप्रेसन भएको अवस्थामा राति दुई–तीन बजे नै निन्द्रा खुल्नेजस्ता लक्षण देखा पर्छन् । युवा उमेरका व्यक्तिले आफ्ना अपेक्षाहरू पूरा गर्न अर्कोले अवरोध गरिदिएको भन्ने मान्छ । आफूले देखेको सुन्दर सपना अरूले पूरा गर्न नदिएको उसलाई पर्छ । यी दुवै एक प्रकारका मेन्टल इलनेस नै हुन् ।
अरूलाई सिध्याउने जुन प्रकारको उत्तेजना देखिन्छ, त्यसलाई मोनोसाइड भनिन्छ । उमेरअनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक रुपमा स्वस्थ नहुँदा मानिस अर्कोलाई सिध्याउने तहमा पुगेको हुन्छ । यसमा एग्रेसन पनि जोडिन्छ । उसले कतै न कतै आफू पनि सकिने र अरूलाई पनि सिध्याउने कुराको सिन्टम दिइरहेको हुन्छ तर परिवारले त्यसमा ध्यान पुर्‍याइरहेको हुँदैन । परिवारले ती लक्षणलाई सामान्य रूपमा लिएको हुन्छ । यस्ता लक्षण देखिएको अवस्थामा तुरुन्तै विशेषज्ञकहाँ लगेर उपचार थालिहाल्नुपर्ने हुन्छ ।
जहाँसम्म प्रेममा अपराध हुने कुरा छ । त्योभन्दा पहिले त्यो वास्तविक प्रेम थियो कि थिएन भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । कतिपय यस्ता अवस्थामा एकतर्फी आकर्षण मात्र हुन्छ । एक्ट्रिम एट्याक्स मात्रले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । यस्ता घटना प्रेमभन्दा पनि मानसिक इलनेसकै कारण नै घट्ने गरेका छन् । जस्तो केटीलाई केटाले धेरै शंका गर्‍यो, उसलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्यो भने केटीले आफ्नो स्पेस खोज्न थाल्छे । त्यो स्पेशको विषयमा केटाकेटीमा असमझदारी उत्पन्न हुन्छ र आपराधिक घटनासम्म पुग्छ । सामान्य अवस्थामा वा स्वस्थ मानसिकता भएको अवस्थामा यस्ता घटना घट्दैनन् ।
प्रकाशित :फाल्गुन २, २०७३
नराम्राका पनि दिन आउँछ
मोबाइलमा पनि एयरब्याग
मन्त्री हुँदा पनि अप्रेसन गर्नुहुन्थ्यो
सुन तस्करीमा राजनैतिक संलग्नताको आरोप जेष्ठ २१, २०७५
नेपाली चलचित्र उद्योगमा नक्कली नोटको तरंग जेष्ठ १४, २०७५
फेसबुकमार्फत युवतीमाथि निशाना जेष्ठ ७, २०७५
सनमलाई रूखमा बाँधेर गोरेले पाइपले कुटे वैशाख ३१, २०७५
अप्रेसन आई बोस फन्दामा नेटवर्किङ व्यवसायीहरू वैशाख २६, २०७५
श्रीमतीको रिसमा दुई नाबालक मारिए वैशाख २५, २०७५
कृतनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद वैशाख २४, २०७५